တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုများပြားကြော? - Yangon Media Group
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုများပြားကြော?
ချီကာဂို ဒီဇင်ဘာ ၁၄
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ တစ်နှစ်လျှင် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ၆ သိန်း ၄ သောင်းကျော် အထိရှိကြောင်း အမေရိကန်ကျန်း မာရေးတာဝန်ရှိသူများက ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တင် ပြောကြားလိုက်ပြီး ယင်းအရေအတွက်သည် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ကနဦးအစီရင်ခံစာ ထက် ပိုမိုမြင့်တက်များပြားနေကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ပျံ့နှံ့နေသော တုပ်ကွေးရောဂါ အခြေအနေပေါ်မူ တည်ပြီး ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၂ သိန်း ၉ သောင်းကျော်မှ ၆ သိန်း ၄ သောင်းကျော်အထိ သေဆုံးရလျက်ရှိသည်။ ရောဂါဘယ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး အမေရိကန်စင်တာများ CDC မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ အဆိုအရခန့်မှန်ချေ လူသေဆုံးမှု ၂ သိန်းခွဲမှ ၅ သိန်းထက်ပိုမိုမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆေးပညာဂျာနယ် The Lancet က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ CDC က ယင်းကဲ့သို့ ခန့်မှန်းထားသည်ထက်မြင့်တက်နေရသည့်အကြောင်းရင်းကို မပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုကွဲပြားသော၊ ပိုမိုကြီးမားသော နိုင်ငံများမှ အချက်အလက်ကို အခြေခံပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ များထံမှ လေ့လားကိုးကားထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ယင်းသေဆုံးမှုများတွင် တုပ်ကွေးရောဂါခံစားနေရချိန်အတွင်း နှလုံးရော ဂါကဲသို့သော တုပ်ကွေးမှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ရောဂါ များကြောင့် သေ ဆုံးမှုများလည်း ပါ​ဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းလေ့လာချက် ကိုပူးတွဲရေးသားခဲ့သူ၊ CDC ၏ တုပ်ကွေးဌာနမှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဂျိုး ဘရာစီးက “ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကြောင့် တုပ်ကွေးရောဂါရဲ့ ပြင်းထန်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ကို တပ်လှန့်လိုက်ပြီး တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရေးဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
စတော့အိတ်ချိန်း ကုမ္ပဏီအသစ် TMH Telecom Public မှ ရှယ်ယာ အရေအတွက် ငါးသိန်းကျော် ရောင်းချသွားမည်၊ ဝယ်ယူလ